Kedu ka m ga esi edozi Microsoft anaghị aza? - Njehie
Isi > Njehie > Microsoft.com anaghị aza - olee otu ị si ekpebi
Microsoft.com anaghị aza - olee otu ị si ekpebi
Kedu ka m ga esi edozi Microsoft anaghị aza?
Soro usoro ndị ahụ.
Pịa igodo Windows + igodo X ma pịa Njikwa Ngwaọrụ.
Andmụbawanye na Network nkwụnye.
Pịa aka nri na Network Driver ma họrọ Mmelite Driver Software.
Chere oge ụfọdụ wee lelee ma nsogbu a ka dị.
Malitegharịa ekwentị gị.
watermark n'elu foto
Kedu ihe kpatara anaghị azaghachi na Windows 10?
Ọ bụ tumadi ala software. Ma ọ bụ ọtụtụ mmemme chọrọ ihe onwunwe, faịlụ efu, nrụrụ faịlụ, nkwụsịtụ usoro, ma ọ bụ usoro ọrụ nhazi ga-arapara. Tupu anyị amalite nrụzi ogologo oge, ka anyị tụlee ihe ị nwere ike ime iji nwetaWindowskazaghachi.
Nnọọ azụ, n'isiokwu nke taa m ga-egosi gị otu esi edozi mmemme anaghị aza na Windows 10 PC ma ọ bụ laptọọpụ bụ azịza a ga-ekwe nkwa, mana m ga-anwa ike m iji nyere aka. Don'tkwesighi ịgbaso ụzọ niile iji nwalee ma dozie ya. Ya mere mafere ụfọdụ ma ọ bụrụ na ịmeelarị ha ma ọ bụ na ha echeghị na ha ga-arụ ọrụ, cheta ịhapụ ihe dị ka ma nweere onwe gị ịdenye aha ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ na-enyere aka.
Ka anyị gbadata usoro, ihe mbụ ikwupụta bụ na ịpụ n'usoro ihe omume ahụ naanị oge ole na ole nwere ike idozi nsogbu ahụ, mgbe ụfọdụ ụfọdụ ngwa ọdịnala na-agba iwu ma ọ bụ rụọ ọrụ nwere ike ime ka nke a pụta, ruo mgbe ha mechara ka ọ bara uru a Gbalịa. Ọzọ, ị kwesịrị ime ngwa, mmemme, ma ọ bụ ọrụ dị mkpa na Task Manager. Nke a ga - agwa Windows na mmemme a bụ ihe kachasị mkpa, na olile anya nke kachasị mkpa, nke ga - enyere ya aka ịzaghachi ọzọ ma mee ya ihe ọ bụla echere ihe. Iji mee ka ngwa ma ọ bụ mmemme dị elu gaa Task mbụ Manager.
Nwere ike ịga ebe ahụ site na ịpị aka nri na taskbar na ala wee họrọ Task Manager site na listi ahụ, mgbe Task Manager mepee, gaa na taabụ nkọwa, ị ga-ahụzi ndepụta ogologo nke ọrụ, nke na-agba na PC gị . Chọta ọrụ ma ọ bụ mmemme na-adịghị aza na listi. Ọ dị n'usoro abiidii kwesịrị inye aka.
Mgbe ịchọtara ya, pịrị-pịa ya n’aka nri, wee dọkpụrụ ihe ngosi ahụ n’elu ihe dị n’elu. Ugbu a họrọ elu site na ịpị ya ma chere obere oge iji hụ ma nke ahụ na-edozi nsogbu ahụ. Ihe ngwọta ọzọ ga - ekwe omume bụ imechi mmemme ndị ọzọ niile, dịka usoro ikpeazụ, nke a kwesịrị inyere PC gị aka ilekwasị anya na ngwa anaghị azaghachi.
Gbalia ịchekwa ọrụ tupu imechi ngwa ndị ọzọ. Ndị a niile bụ ezigbo ndozi oge m nwere maka nsogbu a. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na - eme mgbe niile, enwere m ihe ngwọta ole na ole ọzọ m kwuru nwere ike igbochi nke a na - eme n'ọdịnihu o Njedebe ọrụ na Task Manager tupu ịga n'ihu na ndozi ndị a.
Nke mbu, gbaa mbọ hu na PC gi nwere ike igba sọftụwia ma obu mmemme nke anaghị aza ya. Ọ bụrụ na ọ gara nke ọma n'oge gara aga, ịkwesighi ichegbu onwe gị. Nke a karịrị akarị, mana ọ bụrụ n’itinyebeghị ya mbụ, lelee ma ọ bụrụ na e mepụtara ya maka PC gị dịka.
B. maka macOS kama Windows ma ọ bụ maka ụdị Windows dị iche. Ngwaọrụ PC gị nwekwara ike machibido ụfọdụ ngwa ngwa ịgba ọsọ Lelee na sistemụ gị na-ezute opekempe chọrọ.
Nke a nwere ike ịbụ na weebụsaịtị nke ngwa ma ọ bụ mmemme ahụ, ma ọ bụ na ụlọ ahịa nke ị nwetara ya. Zọ ọzọ bụ ịgbanye ngwa ma ọ bụ mmemme dị ka onye nchịkwa nke mere na ọ ga-emeghe ma rụọ ọrụ nke ọma, chọta ngwa ahụ wee pịa ya aka nri wee họrọ Gbaa dị ka onye nchịkwa hụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ; ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ka ịga na-esote usoro. Na-esote, m ga-akwado imelite ngwanrọ ahụ.
Nke a kwesịrị iwepu njehie ọ bụla na - eme njehie a ma ọ nwere ike ịrụkwa faịlụ ọ bụla mebiri emebi nke nwere ike ịkpata ya. Kwesịrị imelite ngwa ahụ n'onwe gị ma ọ bụ na ụlọ ahịa ị nwetara ya. Mmelite nwekwara ike ịdị na ntanetị.
Ọzọkwa, gbalịa gbanwee ụfọdụ ntọala ahụ, ma ọ bụ chee echiche rue oge mgbe nsogbu ahụ malitere, na ikekwe tọgharịa ntọala niile ka ọ dị na mbụ. Nke a gụnyere ntọala na ngwà ahụ yana n'ozuzu na Windows 10. Usoro ọzọ bụ ịnwale usoro ịmalitegharị ọ bụrụ na ịnweghị.
Reboot nwere ike inyere aka melite ọtụtụ ntọala na PC gị ma ọ nwere ike inye aka dozie nsogbu ahụ. Ọ dị n'aka gị ma ịchọrọ ịnwale nke a ugbu a ma ọ bụ na njedebe nke isiokwu ahụ, mana ọ bụrụ na ịmalitegharị ugbu a mgbe ị laghachiri isiokwu ahụ, anyị ga-enwe ụzọ ole na ole ị ga-esi gbalịa ma nwee olile anya ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ha ga-eme ọrụ. Ugbu a, anyị na-elekwasị anya na mmelite Windows.
Nke mbụ, ọ bụrụ na ịmara na mmelite Windows butere nsogbu a, pịa pịa kaadị ka ịlele edemede m na-egosi gị Otu esi ewepu Windows Update na nso nso a. Ihe ị ga - eme bụ na ọ bụrụ na ị bụ otu narị pacenti doro anya na mmelite ahụ na - akpata nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na nwelite Windows na nso nso a ebuteghị nsogbu ahụ, ọ nwere ike ịba uru ịlele ma wụnye mmelite Windows ọhụrụ Iji lelee maka mmelite Windows, gaa na peeji nke Ntọala, buru ụzọ pịa akara ngosi gia na menu mmalite.
Na ntọala, họrọ Mmelite na Nche. Ugbu a lelee maka mmelite na ibe a ma wụnye ha. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara PC gị agaghị emelite, pịa eserese ngosi ugbu a ka ị gaa na edemede edemede m otu esi edozi nke a ma melite Windows.
Ka ibugharịa na usoro ọzọ. Usoro ọzọ na-elekwasị anya na ngwa Windows naanị. Yabụ ọ bụrụ na ngwa gị esiteghị na Storelọ Ahịa Windows, ị nwere ike ịgba nke a.
fanye pdf onye nbipute
Anyị ga-ebu ụzọ nwalee Windows Troubleshooter apps. Iji mee nchọpụta nsogbu a na nyocha ọchụchọ wee pịa nhọrọ a na - akpọ Nchọpụta nsogbu. N'ebe a pịa njikọ na-acha anụnụ anụnụ nke a na-akpọ Ndị Nchọpụta Mgbakwunye.
Pịgharịa gaa na a ga-enwe nsogbu na-akpọ Window store apps. Run na ma hụ ihe ọ na-ekwu, ụfọdụ omume nwere ike ịkwado. I nwekwara ike gbalịa idozi ngwa ahụ ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ emee mgbe niile.
Tupu ịme nke a, m ga-akwado ịkwado ụfọdụ faịlụ na ngwa ahụ, dị ka: B. Egwuregwu ma ọ bụ faịlụ oru ngo, ọ bụrụ na echekwara ha na folda isi nke ngwa ahụ. Na PC gị, chọta folda isi ngwa ahụ ma detuo faịlụ ọ bụla ị maara nwere ozi ịchọrọ ịdebe.
Tapawa na ebe nchekwa gi na PC. Ga-achọ ime nke a tupu ịmalite usoro ikpeazụ iji dozie ngwa, buru ụzọ gaa Ogwe njikwa. Can nwere ike ịga ebe ahụ site na ịchọ ya na nyocha mmanya.
Na Ogwe njikwa, pịa njikọ na-acha anụnụ anụnụ iwepụ mmemme. Njikọ a dị n'okpuru ngalaba Mmemme akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ị ga-ahụzi ndepụta mmemme niile na PC gị, ị gaghị enwe ike idozi ha niile dịka ụfọdụ anaghị enye nhọrọ a, mana lelee ngwa a na-enwe nsogbu ma pịa aka nri pịa ya. Ọ bụrụ na enwere nhọrọ iji rụkwaa ya kwesịrị ịdị na ndepụta nhọrọ nke na-ebu ibu.
Ọ bụrụ na nhọrọ ahụ adịghị, ọ nwere ike ịsị gbanwee ihe nwere ike ịbụ nhọrọ yiri ya. N'agbanyeghị ihe choose na-ahọrọ, ngwa ọ bụla dị iche, mana soro usoro ọ na-enye ma cheta ịkwado ihe niile na faịlụ ahụ; usoro ikpeazu bu iwepu ngwa. Mgbe nke ahụ gasị, ị ga-enwerịrị ike ịtinyeghachi ha dịka ị mere na oge mbụ.
Cheta ịkwado ntọala niile, egwuregwu echekwara na faịlụ dị na folda ngwa ahụ, ma ọ ga-ehichapụ ha. Iwepu ngwa na Windows 10, ịkwesịrị ịlaghachi ebe anyị gbalịrị idozi ngwa. Ọ bụrụ na ị na-emechi ya, usoro bụ Ogwe njikwa, mgbe ahụ, iwepụ mmemme site na Mmemme ngalaba.
Pịa na ya wee họrọ Iwepụ. Soro usoro ahụ ma hapụ ya ka iwepụ ya. Mgbe nke ahụ gasị, wụnye ya ọzọ ma nwee olileanya na nke a edozila nsogbu ahụ.
N'ụzọ dị mwute, ndị a bụ ụzọ niile m nwere, ọ bụrụ na mgbe mbọ ndị a niile anaghị arụ ọrụ, m ga-akwado nyocha ngwa ahụ na ahụhụ ahụ. Ọ bụrụ na enwere ọgbakọ metụtara usoro ihe omume ị na-enwe nsogbu, nke a ga-abụ ezigbo ebe ịjụ ajụjụ a dịka ha kwesịrị ịnọ n'ọnọdụ ka mma iji nyere aka. Dị ka oge niile, m ga-eme ka nkọwa ahụ dị ọhụrụ site na ngwọta ọhụrụ ọ bụla m chọtara ma ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime gị achọta azịza n'ọdịnihu ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịlaghachi n'isiokwu ahụ ma tinye ya na nkwupụta iji nyere ndị ọzọ aka.
Ugbu a pịa map dị na ihuenyo iji lee otu edemede nke m na-egosi gị ụzọ iri dị mfe ị nwere ike isi mee ka Windows 10 PC gị dị ọsọ. Nyere aka kwado ọwa site na ịga na ụlọ ahịa - njikọ ahụ dị na nkọwa na njedebe nke isiokwu ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, mee ka m mara na nkọwa ndị dị n'okpuru, ma ọ bụrụ na ịchọta na isiokwu taa na-enye aka, gbaa mbọ hapụ ihe dị ka ma denye aha maka ndụmọdụ ndị ọzọ n'ọdịnihu.
Gbalia n close ebe ihu ihe ufodu ederede m nwere ike ichoro gi. Daalụ maka ikiri ma hụ gị n'isiokwu ọzọ!
Gini mere mmemme m anaghị aza?
Mgbe Windowsmmemme akwụsị ịzaghachima ọ bụ friji, ọ nwere ike kpatara ọtụtụ nsogbu dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, esemokwu dị n'etitimmemmena ngwaike na kọmputa, enweghị usoro ihe onwunwe, ma ọ bụ software chinchi nwere ike ime ka Windowsmmemmekakwụsị ịzaghachi.
Kedu otu esi edozi kọmputa gị ka ọ ga-ahazi nke ọma mana ngwaọrụ ma ọ bụ akụ www Microsoft COM anaghị aza?
Megheenke gimmalite menu chọọ 'NgwaọrụOnye njikwa '. Pịa 'Network nkwụnye' na ndepụtankenkwụnye kwesịrị igosi. Right pịa onye ọ bụla na iwepụ ha. Malitegharịa ekwentịkọmputa gịọ ga-agbanwekwa ihe ndị a na akpaghị akangwaọrụ, wee nwaa jikọọ na ịntanetị ọzọ.
Esi edozi microsoft's'not responding'error?
'Azaghị' ndozi - Efu na mfe! Nzọụkwụ 5! - Microsoft Community 'Anaghị aza' Idozi - FREE na mfe! Nzọụkwụ 5! 1. Gaa na Ogwe njikwa (site na Malite menu) 2. Gaa na Nhọrọ Nkọwapụta 3. Gaa na Advanced 4. Gaa na Rebuild 5. Kwe ka ọ na-agba ọsọ, mgbe ahụ ị ga-amaliteghachi. Amaghi ihe kpatara na mana o doziri m njehie ndi 'Anaghi azaghachi' na Vista.
Kedu ihe ọ pụtara mgbe kọmputa gị anaghị aza?
Nsogbu a na-esonyere ya na nsogbu ndị ọzọ dị iche iche gụnyere enweghị nsogbu usoro yana mmemme ndị ọzọ na-akụda ma na-akụ. Ozi njehie ahụ na-agụ “Ngwa Microsoft Windows anaghị aza. You chọrọ ịkwụsị usoro a? ”Na kọmputa ga-mma nnọọ nwayọọ na-esote-agaghị ekwe omume iji.
Gini mere webụsaịtị Microsoft m anaghị azaghachi ozi-e m?
Weebụsaịtị (Microsoft Corporation) dị n'ịntanetị mana ọ naghị azaghachi nnwale njikọ. Achọpụtara achọpụtara. Kọmputa dịpụrụ adịpụ anaghị azaghachi njikọ na ọdụ ụgbọ mmiri 80, ikekwe n'ihi firewall ma ọ bụ ntọala iwu nche, ma ọ bụ n'ihi na ọ nwere ike ọ gaghị adị nwa oge.
Gịnị mere Windows 10 ọkwọ m anaghị aza?
Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa ka mmetụta. The Pro version nke Driver Easy-abịa na zuru oru nkwado. Ekwesịrị idozi nsogbu gị nke Windows 10 anaghị aza. Ọ bụrụ na faịlụ sistemụ na-efu ma ọ bụ mebie, Windows 10 nwere ike ghara ịza. Yabụ ị nwere ike ịgba ọsọ sistemụ sistemụ (SFC) iji nyochaa kọmputa gị, ma mezie nsogbu ọ bụla achọpụtara.